Khilaafaadkii Madaxweynaha iyo Raa’isal Wasaaraha Somaliya oo soo cusboonaaday – Moment Research & Consultancy
Khilaafaadkii Madaxweynaha iyo Raa’isal Wasaaraha Somaliya oo soo cusboonaaday
HESHIISKII ka soo baxay shirkii wakiilada Dawladda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Kampala bishii Juun 9dii 2011 ayaa waxaa ka muuqanaysa qaab la moodo in dadka Soomaalida maamulka talada dalka lala qabanyo. Xilka maamul wixii hadda ka dambeeya ay qayb weyn ka ahaan doonan wadamada Soomaaliya ay xubnaha ka wada yihiin qaar ka mid ah ururrada sida Midowga Afrika , urur goboleedka IGAD , Qaramada Midoobay iyo weliba ururka urur dhaqaalaha Bariga Afrika. Mudada hawshaasu soconeyso kuma cada heshiiska Kampala.
laakinse waxaa jira kooxo dawladda ku jira oo u heysata in iyaga laga soomiyay jagooyin ay hadda ka hor hunguri uga barteen.
Iyadoo Soo baxayaan Inuu Ra’iisal wasaraha Soomaaliya Oo Ka Caga Jiidey Kuna gacan Sayray Inuu iska Casilo Ra’isal wasaraha Soomaaliya Ayaa Waxa Cadeyey Warkaasi Dr Cali Khalif galayr Oo ka Mida Xubnaha Golaha Barlamaanka Soomaaliya Ee Arin Tani Sida Weyn Ula Socda.
Cali Khalif Ayaa Sheegay Inuu xalay U Soo bandhigay Madaxweynaha Soomaaliya Arin tani uuna Ku gacan sayray Saacid arin tani Inuu ku Dhaqaqo taasi oo khilaf Cusub Horseeday madaxweynaha Iyo Ra’iisal Wasaraha Soomaaliya.
Shariif Xasan oo la saftay Xasan Shiikh Wasiirna loo ballan qaaday
Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka soo noqday Wasiirkii Maaliyada Shariif Xasan Shiikh Adan ayaa soo gaaray maalmo ka hor magaalada Muqdisho isagoo la kulmay madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud.
Warar hoose waxay sheegayaan in khilaafka udhaxeeya labada mas’uul uu dabka kusii shiday shariif Xasan kaasi oo madaxweynaha la saftay xil muhiim ahna loo magacaabo Xukuumada Cusub ee lasoo dhisayo.
Shariif Xasan oo ka mid aha murashaxiintii Xilka madaxtinimo isku soo taagay 10-September 2012 ayaa jilaafo udhigay xilligaasi saaxiibkiis ay siyaasada kala fogeysay Sh.Shariif Shiikh Axmed si weyna utaageeray Xasanka hadda madaxweynaha ah.
Waxa loo magacaabi doonaa sida aan xogta ku helayno Shariif Xasan Shiikh Adan Wasiirka Maaliyada Xukuumada Cusub islamarkaana uu hadda ka shaqeynayo sidii xilka looga tuuri lahaa Saacid Shirdoon.
Khilaafka sii xoogeysanaya ee madaxweyaha iyo Ra’iisalwasaaraha udhaxeeya ayaa aad looga deyrinayaa inuu sii baaho hadii aan lagu sameyn “Caano daatay dabadood la qabay”.
XOG:Xaaska Dr saacid Oo ku So Birtay Isjid Jidka Vila Somaliya
November 12, 2013 – Waxaa Tafaftiray warkani : admin –
Xaaska R/Wasaaraha Soomaaliya Xildhibaanad Caasho Xaaji Cilmi ayaa wada abaabul xoogan ay ku dooneyso in ay ku bad baadiso Xukuumada R/Wasaare Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid)
Xildhibaanad Caasha oo ah qof galaan gal badan ku leh Siyaasada Dalka ayaa wada abaabulo ay Xildhibaano tiro badan oo katirsan Dowlada uga dhaadhicineyso qaabkii loo bad baadin lahaa Xukuumada R/Wasaare Saacid kadib markii ay Madaxweynaha isku dhaceen.
Xafiiska R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa ah mid mashquul badan ay kusugan yihiin Xildhibaano katirsan Baarlamaanka iyo Xubno siyaasiyiin ah, waxaana halkaasi kasocda abaabul ka dhan ah qorshaha Madaxweynaha ee ku aadan in R/Wasaaraha is casilo.
Xildhibaanad Caasho Xaaji Cilmi ayaa kulan gaar ah isugu yeertay Haweenka ku jira Baarlamanaka Soomaaliya waxa ayna doonaysaa in ay ka dhaadhiciso qorsho ku aadan in aan la ridin Xukuumada loona guntado sidii loo bad baadin lahaa.
R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa naftiisa ah mid soo jeed kujira Saacadihii ugu dambeeyay waxa uuna wada tashiyo la sameeyay qaar kamid ah Golaha Wasiirada , Xildhibaano iyo Xubno siyaasiyiin ay isku dhaw yihiin kuwaa uu kala tashanayay sida laga yeelayo dalabka Madaxweynaha ee ku aadan in uu iscasilo iyo sida ay Xukuumadiisa kusii jiri karto.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa ah mid si weyn looga dareemayo guuxa ku aadan Khilaafka xargaha goostay ee u dhaxeeya Madaxweynaha Soomaaliya iyo R/Wasaaraha , Xubnaha Golaha Wasiirada ayaana noqday kuwa labo dhinac u qeyb samay oo labada xafiis kala camiray.
Khilaafaadkii Madaxweynaha iyo Raa’isal Wasaaraha Somaliya oo soo cusboonaaday (Warbixin)
Moment Media Ethics – 10 Nov 2013: Waxaa markale soo cusboonaaday khilaafaadkii u dhaxeeyay Madaxweynaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasiirka 1-aad ee Xukuumada Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Khilaafaadkoodaan, ayaa ka dambeeyay markii Masuuliyiintaan ay habeenkii Sabtida kulan ku yeesheen Qasriga Madaxtooyada ee Villa Somalia, kaasoo ay labaduba ku kala irdhoobeen.
Raa’isal Wasaaraha, ayaa Madaxweynaha u gudbiyay liis ay ku qoran yihiin magacyada, xubnaha uu qorsheynaayo in ay kamid noqdaan Golihiisa Wasiirada cusub.
Madaxweynaha, ayaa Raa’isal Wasaaraha u sheegay inaanu ka sugeyn in uu u soo gudbiyo liis, ay ku qoran yihiin xubnaha cusub ee Golaha Wasiirada. Laakiin uu ka sugaayay in uu u soo gudbiyo warqadiisa istiqaalada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sidoo kale Raa’isal Wasaare Shirdoon ku eedeeyay, in uu waqti badan ka luminaayo Dowladda. Sidaasi daraadeedna uu soo dedejiyo is casilaadiisa.
Madaxdu, waxay isku qabteen arrinta ku aadan in uu Raa’isal Wasaaruhu soo dedejiyo is casilaadiisa. Taasoo sababtay baala yiri in ay fadhiga ku kala kacaan.
Warar madax banaan, ayaa sheegaaya in Madaxweynuhu uu ku hawlan yahay, sidii uu meesha uga saari lahaa Raa’isal Wasaare Saacid. Inkastoo hadana shaki laga muujinaayo suurta galnimada, sidii uu meesha uga saari lahaa Saacid.
Guriga Xildhibaanad Ubax Tahliil Warsame, waxaa Axadii ka bilowday olole lagu doonaayo, in meesha looga saaro Raa’isal Wasaare Saacid. Isla-markaana Xildhibaanada Baarlamaanka qaarkood, ayaa halkaasi isula jeex jeexaaya, sidii ay mooshin uga keeni lahaayeen Raa’isal Wasaaraha.
Ololaha ka soconaaya hoyga Marwo Ubax Tahliil, ayaa ahaa mid horeyba u soo jiitamaayay, inkastoo uu xoogeystay wixii ka dambeeyay habeenkii Sabtida, oo uu soo ifbaxay khilaafaadka hogaanka dalka.
Madaxweynaha, oo aanu horey u taageersaneyn olalaha ay wadaan garabka Xildhibaanad Ubax Tahliil, ayaa la carabaabay in uu iminka u muuqdo in uu taageersan yahay. Sababo la xiriira Raa’isal Wasaaraha oo ka biyo diidan, in uu shaqada isaga taggo.
Arrinta shakiga gelineysa in meesha laga saaro Raa’isal Wasaaraha, ayaa waxay tahay, in iyadoo in ka badan 100 Xildhibaano, ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin.
Ilo muhiim ah, ayaa Shabakada Warbaahinta ee MOMENT MEDIA ETHICS u sheegay, in ilaa 161 Xildhibaano oo qura, ay ku sugan yihiin Magaalada Muqdisho, halka inta kalana ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin. Xilli tirada guud ee Xildhibaanada Baarlamaanka ay tahay 275 Xildhibaano.
Sida uu Sharcigu qabo waxaa Raa’isal Wasaaraha mooshinka ka keeni kara 139 Xildhibaano. Haddii wadarta Xildhibaanada ee dalka ku sugan ay tahay 161 Xildhibaano. Laakiin Raa’isal Wasaaraha ayaa u baahan, in uu helo kalsoonida 22 Xildhibaano oo kaliya.
Si kastaba ha-ahaatee dadka rog-rogga Siyaasada dalka, ayaa waxay qabaan in ay adag tahay, in xilligaan la jooggo mooshin lagu rido Xukuumada Saacid. Waxayna taasi ku saleeyeen Xildhibaano fara badan, oo aanu ku qanacsaneyn Siyaasada Madaxweynaha.
UJEEDO: WAR SAXAAFADEED ee XISBIGA XURIYADDA
XISBIGA XURIYADDA marki uu qiimeeyay xaaladaha amniga iyo siyaasada ee uu dalku ku jiro xilligan wuxuu soo saaray war saxaafadeed ka kooban 6 qodob:
1. XISBIGA XURIYADDA wuxu aad uga xunyahay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka dhex jira madaxda sare ee dowlada federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha, xilli uu dalku ku jiro xaalado amni xumi, dhaqaale xumi iyo colaado saameeyay kumanaan Soomaali ah oo ku kala nool gobolada dalka. Wa nasiib daro mar kale ku dhacday shacabka Soomaliyeed oo sugayay isbedel iyo horumar dhinaca nolosha ah. Sidoo kale khilaafka madaxda sare ee dowladu wuxu niyad jab ku yahay beesha caalamka oo u heelaneyd wax u qabashada Soomaaliya, kana rajo qabtay in Soomaaliya ka gudubtay siyaasadaha ku dhisan kooxeysiga iyo qabiilka.
2. Madaxweynaha Soomaaliya waa mas’uulka ugu sareeya dalka waxana ka sugeynay inuu la yimaado isbedelki uu horey ugu baaqay, waana ayaan daro inuu dalka dib ugu celiyo khilaafki iyo isqab-qabsigii ey ku bur-bureen dowladihii KMG ahaa, waxaana ugu baaqeynaa madaxweynaha inuu iska daayo siyaasada ku dhisan kooxeysiga, waana inuu ilaaliyo sharciga iyo mas’uuliyada ka saran dalka iyo dadka, uuna la yimaado xal siyaasi ah oo soo celi kara kalsoonida shacabka.
3. XISBIGA XURIYADDA Wuxu ku baaqeynaa in deg deg loo aasaaso maxkamad dastuuri ah iyadoo la raacayo habka uu tilmaamayo Cutubka 9aad, (Qodobka 109B) ee dastuurka federaalka KMG ah, maxkamadaas oo leh awooda dastuuriga ah ee go’aan ka gaarista khilaafyada ka dhex jira waaxaha dowlada federaalka ee la xirrira awoodaha iyo waajibaadka ey kala leeyihiin sida ku cad Cutubka 9aad (Qodobka 109C) (farqadiisa E). Hadaba, si looga fogaado khilaafyada soo noq-noqonaya loona helo xal aan ku dhisneyn is xulafeysi qabiil, mid kooxeed iyo xeer beegti, Isbaheysiga Nabadu wuxuu usoo jeedinayaa hey’adaha leh mas’uuliyada sameynta maxkamada dastuuriga ah iney xil iska saaraan si deg deg ah.
4. XISBIGA XURIYADDA wuxuu ugu baaqayaa Xubnaha Baarlamanka federaalka Soomaaliya iney muujiyaan wadaniyad eyna u hiiliyaan sharciga maadaama ey wakiil u yihiim shacabka, waana iney ogaadaan xil ka qaadis aan sharci ku dhisneyn iney saamey doonto xildhibaanada qudhooda oo iyagana sharci daro xilalka looga qaadi doono, dadka Soomaaliyeedna wuxuu eegayaa sida ey xildhibaandu u wajahaan xalinta khilaafka xilligan ka dhex jira madaxweynaha iyo ra’isul wasaaraha dowlada federaalka.
5. XISBIGA XURIYADDA wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa baarlamanka federaalka ah inuu deg deg u furo nidaamka axzaabta kaas oo ah hanaanka kaliya ee lagu heli karo dheeli tirka dowladnimo loogana gudbi karo qabiilka, muwaadiniinta soomaaliyeedna ey ku heli karaan awood ey six or ah ugu dooran karaan cida ey rabaan.
6. Ugu dambeyn waxaan ugu baaqeynaa waxgaradka, ganacsatada iyo dhamaan qeybaha bulshada iney isu naxariistaan si ilaahey ugu naxariisto, sidoo kale waxaan ugu baaqeynaa beelaha ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan G/Shabeelada dhexe iney joojiyaan dagaalada.
November 13, 2013 by multiethnicsociety